ဆင်းရဲတွင်းက … နက်လေတော့ – Grab Love Story
စကားလုံးဆိုတာ … ဓါးလိုပဲ … ပြောတတ်ရင် ထက်တယ် … အပြောခံရရင် … ဓါးထိုးခံရသလို … နှလုံးသွေးစိမ်းရှင်ရှင် … ထွက်တတ်တယ် … ဟိုနေ့က … ညီမလေး ယောက်ျား အိမ်သစ်တက်ပွဲ လုပ်တယ် … အေး … မသွားချင်ပါဘူး … ရှက်တယ် … သွားခိုင်းတာက … အဖွား … ညီမလေးဆီသွားလိုက်ပါတဲ့ … ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ … ဧည့်ခံပုံလေးက …
နင်က ပြည့်တန်ဆာပဲ … နောက်တခါ ဒီအိမ်မလာနဲ့ … ကြက်သရေတုံးတယ် … အိမ်ယုတ်တယ်တဲ့ …
တအူတုံဆင်း … ညီအမတွေလေ … ပြောရက်လိုက်တာ … သူ ကျောင်းတက်တုန်းက ပိုက်ဆံ … ဘယ်ကရလဲ … နေ့တိုင်းစားတဲ့ ထမင်း ဘယ်ကရလဲ … အေး … အရမ်း ဝမ်းနည်းတယ် … စကားလုံးတွေ နားထဲမှာ ပဲ့တင်ထပ်နေတယ် … နင်က ပြည့်တန်ဆာ … ဟုတ်ပါတယ် … အေးက … ပြည့်တန်ဆာ … မကောင်းတဲ့မိန်းမ … လမ်းပေါ်က မိန်းမ … အေးတို့ … လုပ်ငန်းခွင်က … ပန်းဆိုးတန်းမှာ … ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ … ဟိုရပ် … ဒီငေး … ဟိုလူခေါ် … ဒီလူချ … အသွေးအသားကို … ခပ်ပေါပေါနဲ့ ရောင်းစားနေတဲ့ … မိန်းမ …
စိတ်က မပျော် … အိပ်လို့လည်း မပျော် … မကြာခဏ လန့်လို့ နိုးတယ် … အိမ်မက်ဆိုး … ဘဝဆိုတာ … ကောင်းတလှည့် ဆိုးတလှည့် တဲ့ … အေး အတွက် … အဆိုးတွေချည်း လာနေတယ် … ဘယ်အချိန်မှ ကောင်းတာလေး လာလေမလဲ … အေး အကြောင်းကို … ရင်ဖွင့်ရရင် … ဆင်းရဲမွဲတေမှုက … တရားခံလား … မပြောတတ် … အဖေက အရက်သမား … အမေက ဆုံးပြီ … အဘွားက အိပ်ယာထဲမှာ ပက်လက် … နေတာက တဲစုတ် … ယိုင်နဲ့နဲ့ … ညညဆို … ကြယ်တွေ မြင်ရတယ် … မိုးတွင်းဆို … ပိုဆိုးပေါ့ … စားစရာလား .. .အင်း … ဆန်အိုးထဲမှာ … ဆန်က မရှိ … ညီမလေးက … ငါးတန်း … သင်ရိုးစာအုပ် မဝယ်နိုင် … ဗလာစာအုပ် ဝေးပေါ့ … ကျောင်းစိမ်းလေးက နှစ်ထည် … အနေအထားက စုတ်ပြတ် … အဖေကလည်း … အားကိုးမရ … တော်သေးသည် … မူးလာရင် မရမ်းလို့ … တရက်တော့ … အကြံကောင်းလေး ဝင်လာသည် … သမီး … ဟိုလူနဲ့ တညသွားအိပ်လိုက်တဲ့ … အဖေ့မှာ အရက်ဖိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့ … ရက်စက်လိုက်တာ … အဖေရယ် … မူးပြီးပြောနေတာလား … ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံ … သမီးကို ဖာဇာတ်သွင်း … သူကတော့ … အပြတ်မူးမယ်ပေါ့ … အိမ်က ဆန်အိုး ပြည့်အောင် မရှာပဲ … အချိန်တိုင်း မူးနေတာ … အကြံကောင်းကတော့ ထွက်တယ် …
ပြန်မတွေးချင်ဘူး … ရင်နာတယ် … ရာသီလာစ … တခါ နှစ်ခါ … လေးငါးခါပေ့ါ … ဖြူဖြူစင်စင် ဘဝလေး …. အဆုံးသတ်လိုက်တယ် … ညစ်နွမ်းသွားတယ် … ပွန်းပဲ့သွားတယ် … ပျက်စီးသွားတယ် … အရက်ခိုးဝေတဲ့ … မျက်နှာ … တဏှာခိုးဝေတဲ့ အပြော … အို … အရသာခံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် ကောင်းဘူး … ကြောက်လိုက်တာလွန်ပါရော … ချွတ်ခိုင်းတယ် … နမ်းတယ် … ကိုင်တယ် … နယ်တယ် … အရသာခံတယ် … အေးကတော့ … အသတ်ခံရခါနီး ဝက်လေးလို … တအီးအီးနဲ့ … သူကတော့ … ဒီအသံကို … တဏှာခံတယ် … သိပ်သဘောကျတယ် … ကလိတယ် … ရိတယ် … ဆွတယ် … နယ်တယ် … အေး … ငိုတယ် … သူ့ဟာ ဝင်လာတယ် … မဆန့်ဘူး … အတင်းထည့်တယ် … မရဘူး … ပေါင်ဖြဲခိုင်းတယ် … အေးမှာ အရှက်တရားဆိုတာ မရှိတော့ဘူး … ပျောက်သွားတယ် … မညှာတာပါဘူး … မဝင်တာကို အတင်းထည့်တယ် … ပွန်းတယ် … အောင့်တယ် … ခံရခက်တယ် … အော်လွန်းတော့ … ပါးစပ်ကို ပိတ် … အတင်းချုပ်ပြီး … အတင်းဆောင့်ထည့်တယ် … ဝင်ပြီပေါ့ … နာတယ် … အရမ်းနာတယ် … သေလောက်အောင်နာတယ် … ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး … သေနာကြီး … အာာာာာာား …..
မခံနိုင်ဘူး … အတင်းဆောင့်တယ် … ရုန်းတယ် … မရဘူး … ပိုဆောင့်တယ် … အေး … မောလာတယ် … မခံနိုင်ဘူး … တောင်းပန်ပါတယ် … မလုပ်ပါနဲ့ … ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး … စိတ်ချ … သူများပိုက်ဆံယူပြီးမှ … တန်ရာတန်ကြေးတော့ ပြန်ပေးဆပ်ရမှာပေါ့ … ခံ … အေးရေ … အံကြိတ်သာခံပေတော့ … အိုးကွဲအောင် … ဆောင့်လည်း … ခံရမှာပဲ … အေးမှ ပိုက်ဆံမရှိတာ … လူတွေမှာ အကြင်နာတရား မရှိပါလား … သမီးအရွယ်ကို … ပြဲကွဲနေအောင် … ဆော်တယ် … အားရအောင် ဆော်တယ် … သွေးအလူးလူးနဲ့ … မိန်းကလေးကို … သနားမယ်များထင်နေလား … သွေးထွက်လေ … ပိုဆော်လေပဲ … ခံရတဲ့သူကတော့ … လိမ့်နေတာပဲ … လုပ်တဲ့လူကတော့ … ကောင်းလိုက်တာတဲ့ … ဘာကောင်းတာလဲ … ထွီ …
နည်းနည်းတောင့်လို့ တော်သေးတယ် … ခပ်သေးသေးဆို … ခါးရိုးကျိုးမလားမသိပါဘူး … အရမ်းဆောင့်တာ … အရမ်းနာတယ် … အထဲမှာ … အသားဆိုင်တွေ … ပွန်းပဲ့ကုန်တာ … စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ … သေလောက်အောင်နာတယ် … အဝင်လည်းနာတယ် … အထွက်လည်း နာတယ် … ဒီကြားထဲ … အမွှေခံရတယ် … အေး … သေတော့မယ် … သေချင်တယ် … သေသွားလိုက်ချင်တယ် … အရှက်လည်း မရှိတော့ဘူး … သိက္ခာလည်း မရှိတော့ဘူး … ဘာမှ မရှိတော့ဘူး … စောင်လေးကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ပြီး … ခံတယ် .. အံကြိတ်ပြီးခံတယ် … သူလည်း ပေးရတာနဲ့ … တန်အောင်ယူတယ် … ယူပါ … တခုလိုရင် တခု ပေးဆပ်ရမှာပေါ့ … အေး ဝမ်းနည်းတယ် … တခါပြီးတော့ … နောက်တခါ … အေး … မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး … အပေါ်က လုပ်တယ် … အောက်ကလုပ်တယ် … ခုတင်စောင်းမှာ … ဖင်ကုန်းခိုင်းတယ် … အမျိုးစုံပဲ … ဒူးတွေမှာ အားမရှိတော့ဘူး … ခေါင်းက မူးနေတယ် … ဒီလိုနဲ့ မနက်မိုးလင်းသွားတယ် … အေး … ခွေးသေကောင်လေးကို … ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက် … အေး … အိမ်ကို လေးဘက်ထောက်ပြီး ပြန်ရတော့မယ် … အားမှမရှိတာ … သူကတော့ တော်တော် အားရနေတယ် … အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့ … တကယ်ပါ … ဘာခံစားချက်မှ မရှိတော့ဘူး … ဒီဘဝရောက်မှ … မျှော်လင့်ချက်တွေ … အကုန်ပျောက်သွားတယ် … စိတ်ညစ်တယ် ..
အေး ရလိုက်တာက … ဆန်အိုးထဲမှာ ဆန်တွေ ပြည့်သွားတယ် … လမ်းထိပ်က ကုန်စုံဆိုင်က အကြွေး ရှင်းသွားတယ် … အိမ်လေးက အမိုးအကာ လုံသွားတယ် … အဲဒီနေ့က … ဝက်သားချက်တယ် … ညီမလေးက ပျော်နေတယ် … အေးက … ငိုနေတယ် … အဖေက ပိုမူးတယ် … အေး … ရှက်တယ် … ဝမ်းနည်းတယ် … အေး စိတ်ထဲကို … သံ တချောင်း ခပ်ပြင်းပြင်း ရိုက်ထည့်ပစ်လိုက်တယ် … ငွေ …
ငွေ … အေးမှားတယ် … မှန်တယ် … စဉ်းစားရင်း … ငိုလိုက် … ဖြေသိမ့်လိုက်နဲ့ … တလကျော်တော့ … ကုန်ပြီလေ … ဆန်အိုးထဲမှာ ဆန်မရှိတော့ဘူး … ထုံးစံအတိုင်း … ဒုံရင်းပေါ့ … စိတ်နာတယ် … အေး … မလုပ်ချင်ဘူး … အဆီပြန်နေတဲ့မျက်နှာ …. မချိမဆန့် … ဝေဒနာ … ဒါတွေ … ဘယ်သူသိမှာလဲ … အတွင်းကြိတ်မွှေခံရတဲ့ … ဝေဒနာ … အို … လမ်းတောင် … မလျှောက်နိုင်ဘူး … ဟင်း …
လူပွဲစားက … သွေးသားရောင်းဖို့ … လာစပ်တယ် … အမျိုးကောင်း … လူကြီးတဲ့ … ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေ ရထားတယ်တဲ့ … ကျိကျိတက် ချမ်းသာတယ်တဲ့ … ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် … အမျိုးကောင်းတယ် … ထွီ … နည်းတဲ့ ဟာကြီး မဟုတ်ဘူး … ထွီ … ဒီလူအိုကျားက … ပိုကြမ်းတယ် … အတင်းနမ်းတယ် … အတင်းနယ်တယ် … ညှစ်တယ် … အေး … အံကြိတ်တယ် … ခံတယ် … နာတယ် … မအော်မချင်း ညှစ်တယ် … အေး … အော်တယ် … ငြီးတယ် … အို … ပိုဆိုးတယ် … နာလေ … ပိုလုပ်လေ … တောင်းပန်လွန်းတော့ … စုပ်ပေးရမယ်တဲ့ … တောက် … အေး … နှုတ်ခမ်းကို … တင်းနေအောင် ကိုက်ထားပြီး … စဉ်းစားတယ် … ပါးထချပစ်လိုက်ရမလား … သမီးအရွယ်ကို … စုပ်ခိုင်းတယ် … သူက ဖီးခံမယ် … အေးက … သေးပေါက်တဲ့ဟာကို … စုပ်ပေးရမယ် … တော်ပါ … ရွံတယ် … အေး အဝတ်တွေ ကောက်ဝတ်တယ် … ပြန်တော့မယ်လုပ်တော့ … မရဘူးတဲ့ … ပိုက်ဆံတွေ ပေးပြီးပြီတဲ့ … တန်ရာတန်ကြေး … လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ … မညစ်ပတ်နဲ့တဲ့ … အော် … ညစ်ပတ်တာက ဘယ်သူလဲ … စုပ်ခိုင်းတာက … ဘယ်သူလဲ … ရွံစရာကြီး …
ဖောင်းကနဲ … ပါးချခံရသည် … လူကို လည်ထွက်သွားတာပဲ … ကျောင်းဒကာ … မြို့မျက်နှာဖုံးက … တဏှာစီးနေတော့ … ကြမ်းတော့သည် … ဒဿဂိရိလို … ခေါင်းဆယ်လုံးနဲ့ နမ်းသည် … မုန်ယိုတာများ … လူကို ရစရာမရှိ … မျက်နှာဖုံးကြီး ကွာကျသွားတယ် … အေး မှတ်မိတယ် … အဲဒီညက … နာဂစ်ထက်ဆိုးတဲ့ည … သေလောက်အောင် မှတ်မိတယ် … လူကို … ဆက်ဆံတာများ … အို … အေးဘဝက … ခွေးထက်တောင် … နိမ့်ပါလား … ရိုက်တယ် … နှက်တယ် … ချတယ် … ဆော်ခံရတယ် … မျက်နှာတွေလည်း ယောင်လို့ … ပေါင်ကြားကလည်း … ယောင်လို့ … ကိုင်းလို့ … ပေါင်းရင်းတွေမှာ … အညိုတွေ စွဲနေတယ် … ရင်သားမှာ … လက်ရာကြီးတွေ ထင်ကျန်ခဲ့တယ် … မှတ်ပြီလား ကောင်မတဲ့ …
အေး … မငိုနိုင်တော့ဘူး … အေး … သေချင်တယ် … သတ်သေချင်တယ် … ဘဝက အရမ်းဆိုးတယ် … ကြုံရတဲ့လူတွေက … လူမဆန်ဘူး … ပြောတော့ လူကြီးလူကောင်း … လုပ်တာက … ခွေးသာသာ … အို … ခွေးမဟုတ်ဘူး … လူ့တိရစ္ဆာန် … အေး … အသံတိတ် … ဆဲနေတယ် … ရင်ထဲမှာ … ကျိန်ဆဲတယ် … ဆောင့်တယ် … ပြဲကွဲနေအောင် ဆောင့်ခံရတယ် … ခုတင်စောင်းမှာ … ဖင်ထောင်ပြီး … နောက်ကနေ ဆော်တာ … အို … အသဲခိုက်မတတ် … နာတယ် … အို … အော်တာပေါ့ … အကျယ်ကြီး … အော်တဲ့ … ဘယ်သူမှ မကြားအောင် … ဒီအခန်းက … အလုံခန်း …
အမျိုးကောင်း … လူကြီး … ဆောင့်တိုင်း … အေး … အရှေ့ကို … တပေလောက်ရွေ့သွားတယ် … ရန်ုးမရအောင် … ခါးကို … အတင်းဖိပြီး … ဆောင့်တယ် … ပက်စက်တယ် … ရက်စက်တယ် … ကျား … သွေးဆာနေတဲ့ ကျား ကိုက်ခံရတောင် … ဒီလောက်နာမှာမဟုတ်ဘူး … အချိန်ရယ် … ကုန်ပါတော့ … မိုးရယ် … လင်းပါတော့ … ရှိကြီးခိုးပါတယ် … ငိုတာပေါ့ … မျက်ရည်တောင် မထွက်တော့ဘူး … အားမရှိတော့လို့ … ဒီလိုနဲ့ … မိုးလင်းသွားတယ် … အေး … မျက်စိ မဖွင့်နိုင်တော့ဘူး … လုပ်ချင်သလိုသာ လုပ်တော့ … ဒါတောင် … သိပ်မကျေနပ် … အားမရဘူးတဲ့ … ဆက်ဆံရေး မကောင်းဘူးတဲ့ …
အဘွားက … မသိ … အေး … နယ်မှာ အလုပ်ရတယ်လို့ .. ညာထားတယ် … သူ သိရင် … ရင်ကျိုးမှာ … အဘွားကို … ချစ်တယ် … အေးကြောင့် စိတ်မညစ်စေချင်ဘူး … အေး … ရောက်နေတာက … ဘိ … အိမ်ကြီးထဲမှာ အခန်းလေးတွေ ကန့်ထားတယ် … တယောက်တခန်းနေ … မွေ့ယာရှိတယ် … ဘေးမှာ မှန်တင်ခုံရှိတယ် … အပြင်မထွက်ရ … မနက်စောစောထ … သန့်ရှင်းရေးလုပ် … ကျွေးတာစား … ဧည့်သည်လာရင် … အားလုံး … ထွက်ပြရတယ် … ကိုယ့်ကို … ကြိုက်လို့ … ခေါ်ရင် … နာရီဝက် … နေရတယ် … အခန်းထဲ ခေါ်လာတယ် … တံခါးပိတ် … အင်္ကျီချွတ် … လုပ် … လုပ်သမျှ ခံ … ပြီးရင်ထွက်တော့ … နောက်တယောက် …
အေးနဲ့ ဘဝတူ ငါးယောက်ရှိတယ် … အေးပါရင် ခြောက်ယောက် … အေးကို … သူတို့ ကြည့်မရ … စကားမပြော … အေးက … အသစ်ကိုး … ပါကင်ကျလေ … ဧည့်သည်လာတိုင်း … အေးကို ပဲ ရွေးတယ် … အငယ်ဆုံးကိုး … လာလိုက်တဲ့ ယောက်ျားတွေ … ပုံနေတာပဲ … တခါတလေ … လူကျတဲ့ ရက်မျိုးဆို … သေးတောင် ပေါက်လို့မရဘူး … တယောက်ကို … ၁ ထောင် ရတယ် … အဲဒီလက … အေး … ၃၀၀ ကျော်တယ် … တယောက်ကို … ၁ ထောင် … ဆယ်ယောက်ကို … ၁ သောင်း … ၁၀၀ ကို … ၁ သိန်း … ၃၀၀ ဆိုတော့ … ၃ သိန်းကျော်ရတယ် … လူလည်း … မျော့မျောပဲ ကျန်တယ် …
အေးကို … ဘယ်သူမှ မခေါ်ချင်ကြဘူး … ရေချိုးရင်လည်း … မဲ့ကြရွဲ့ကျတယ် … အေး စိတ်ညစ်တယ် … အေးကလည်း … အေးပဲ … မပြုံးနိုင်ဘူး … ခပ်တည်တည်ပဲ … ရင်ထဲမှာ ငိုနေတာ … သူတို့မှ မသိတာ … သူတို့ကတော့ … အသားကျသွားပြီ … ပျော်နေပြီ … ရီနေပြီ … ဧည့်သည်လာရင် … တခစ်ခစ်ရီသံက … အခန်းပြင်ကို … လျှံကျနေသည် … ရီစားသည် … ချူစားသည် … အေး … မလိုချင်ပါဘူး … မလုပ်ချင်ဘူး … ချူမစားချင်ဘူး … သဒ္ဒါလို့ ပေးတာပဲ ယူတယ် … တချို့ကလည်း … သဘောကောင်းတယ် … တချို့ကလည်း သဘောဆိုးတယ် …
ညဘက်လည်း ကောင်းကောင်း အိပ်ရမယ် မထင်နဲ့ … တညလုံး နေတဲ့လူမျိုး … ရှိတယ် … တညလုံး … လုပ်တာ … ဒါမျိုးနဲ့ တွေ့ရင် … ဖတ်ဖတ်ကို မောရော … အိပ်ရေးလည်းပျက်ရော … အထိန်းတော် …. ဒေါ်ကုလားမ … ကတော့ … ဝမ်းတွေသာလို့ … သုံးဆလောက် ပိုရတာကိုး … အေးကတော့ … နှာခေါင်းကို … တွန့်လို့ …
အော်ဒါ … အပြင်မှာ လိုက်အိပ်ဖို့ … ခေါ်တယ် … အေး လိုက်ရတယ် … ဒေါ်ကုလားမကို … ပိုက်ဆံ … အစည်းလိုက် … ပေးသွားတယ် … အင်း … ငါတော့ သေပြီနဲ့ တူတယ် … အေး … ပိုက်ဆံရမှာ … တော်တော်ကြောက်လာတယ် … ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ … လေးယောက် … အိုး … ခွေးလေးကောင်ကြားရောက်တဲ့ … အမဲရိုးလိုပဲ … အလုအယက် …
တယောက်ပြီးတော့ … နောက်တယောက် …
နောက်တယောက်ပြီးတော့ … နောက်တယောက် …
အိုး … အေး … ဖတ်ဖတ်ကို မောရော … ခေါင်းတောင် ကိုက်တယ် … မောလို့ အသက်ရှူဖို့လုပ်တုန်း … လုပ်ပြန်ပြီ … တယောက် … လေးယောက် ပတ်ချာလည် … ဆော်တာ … ခံပေါ့ … မိုးအလင်းပေါ့ … တယောက်က … အောက်ကိုလုပ်ရင် … တယောက်က … အပေါ်က ဟာကို … ကိုင်တယ် … ညှစ်တယ် … လေးယောက်လုံး … မူးနေတော့ … ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ အားကြီးပြောတယ် …
ခြောက်လလောက်နေတော့ … အေး … ဘိ မှာ မနေတော့ဘူး … စာတတ်သွားပြီ … ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်စားမယ် … နားစွင့်ထားတယ် … လာတဲ့လူတွေကို … မေးစမ်းထားတယ် … သွားမယ် … ပန်းဆိုးတန်းကို …
+48 Vote Up
Re: (၅) ဆင်းရဲတွင်းက … နက်လေတော့ (၁၈+)
« Reply #3 on: May 15, 2011, 09:42:50 PM »
သေချင်တဲ့ကျား … တောပြောင်း … မှန်လိုက်တာရှင် … မှန်လိုက်တာ …
ပန်းဆိုးတန်းမှာ … အထိန်းရှိတယ် … အုပ်ထန်းခ … ၁၀၀၀ ပေးရမယ် … လူမိုက်ရှိတယ် … စောင့်ရှောက်ခ … ၁၀၀၀ ပေးရမယ် … အေးက သုံးထောင်ရမယ် … တခါနေရင် … ၅၀၀၀ …
သွားရတာ … အရမ်းဝေးတယ် … ပန်းဆိုးတန်းရောက်ရင် … ဟိုငေးဒီငေး … ဟိုကြည့်ဒီကြည့် … လာခေါ်ရင် … လိုက်သွား … တည်းခိုခန်း … နာရီဝက် … တခါနေ … ပြန်ဆင်းလာ … လူမျိုးကို စုံနေတာပဲ … ခပ်ငယ်ငယ်လည်း လာတယ် … ခပ်ကြီးကြီး အဘလည်း … လာတယ် … ဟိုလူလည်း လာတယ် … ဒီလူလည်း … လာတယ် … အေးကို ခေါ်ရင် … လိုက်သွားတယ် …
နေ့ခင်း … ထမင်းကြော်စားတယ် … အအေးသောက်တယ် … အေး ပိုက်ဆံ စုနေတယ် … အေး … မဖြုန်းချင်ဘူး … စိတ်ညစ်တာလည်း … ညစ်တာပေါ့ … လူတွေရဲ့ အကြည့်ကို မုန်းတယ် … ဟုတ်ပါတယ် … အေးက … မကောင်းတဲ့ မိန်းမပဲလေ … အထင်သေးမှာပေါ့ … တခါတလေလည်း … စိတ်လွတ်လက်လွတ် … မုန့်တွေ ဝယ်စားပစ်လိုက်တယ် … အဝတ်အစားကောင်းကောင်းတွေ ဝယ်တယ် … ဖြုန်းတယ် … ဟင့်အင်း … နောက်နေ့ မဖြုန်းတော့ဘူး … အနာခံပြီး ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံ … အေး မသုံးရက်ဘူး … အဝတ်ကောင်းကောင်းဝတ်တော့ … သူများတွေ ကြားထဲမှာ နည်းနည်းတော့ ထင်ပေါ်တာပေါ့ …
ဖင်ပေါ်တာတော့ မဝတ်ချင်ဘူး … ရှက်တယ် … ခစ် … ခစ် …
ရီတော့ရီရတယ် … ယောက်ျားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ … အေးမှာ ခံစားချက် မရှိတော့ဘူး … ရွံတယ် … မုန်းတယ် … တခါတလေတော့လည်း … ရီးစားတယောက်လောက်တော့ … လိုချင်တယ် … ခစ် … ခစ် … အာ … ရှုပ်ပါတယ် … ယောက်ျားဆိုတာ … ကောင်းကို မကောင်းတာ …
ရုပ်ရှင်ရုံထဲခေါ်လည်း … လိုက်ရတယ် … ဟိုကိုင်ဒီကိုင် … ၃၀၀၀ ရတယ် … ကုလားကားက အရှည်ကြီး … တော်တော်ကြာတယ် … လုပ်ပေးရတာလည်း … အကြာကြီး … လက်ကို ညောင်းနေတာပဲ … ကုလားကားကို … မကြိုက်ဘူး … တိုင်ပတ်ပြီးကနေတာ … တော်တော်ဆိုးတယ် … သူတို့ကတာအရေးမကြီးဘူး … တကိုယ်လုံး မွစာကိုကြဲကုန်ပြီ … နှိုက်တယ် … ကိုင်တယ် … စို့တယ် … ညှစ်တယ် … အို … စုံနေတာပဲ … ယောက်ျားတွေက … တန်အောင်တော့ လုပ်ကြတယ် …
ဘာလိုလိုနဲ့ … ညီမလေးတောင် … ဆယ်တန်းရောက်တော့မယ် … အိမ်က … တော်တော်လေး ချောင်လည်လာတယ် … အဘွားလည်း … တော်တော် နေကောင်းလာတယ် … အဖေက … အရက်မသောက်တော့ဘူး … အေးကို သနားလို့တဲ့ … အရက်ကို ဖြတ်တယ် … မသောက်တော့ဘူး … ဘယ်ခံနိုင်မလဲ … ဒီလောက် နှစ်နဲ့ ချီပြီး သောက်နေတာ … အသည်းက … ဇကာပေါက် ဖြစ်နေရောပေါ့ … သနားပါတယ် … ဖြေးဖြေးလျှော့သောက်လို့ …
ပန်းဆိုးတန်းမှာ လုပ်တာ … ကောင်းတော့ ကောင်းပါရဲ့ … ဝင်ငွေလည်း မဆိုးပါဘူး … ဒါပေမယ့် … အေး … မနေတတ်ဘူး … မြို့လည်ကောင် … ရုပ်ရှင်ရုံတွေ နားမှာဆိုတော့ … လူတွေက ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတယ် … မကြိုက်ဘူး … မျက်လုံးတွေကို … အေး မကြိုက်ဘူး … အကြည့်တွေကို … အေးမကြိုက်ဘူး … အထင်သေးသလိုလို … ဘာလိုလို … ဟုတ်သားပဲ … နင်က … ဖာသည်ပဲ … အထင်သေးမှာပေါ့ … စိတ်ကိုလျှော့လိုက်တယ် … ရဲတွေဘာတွေ … ကင်းလှည့်လာရင် … အေးတို့က … နေစရာ မရှိ … ဟိုနေရာ ပုန်းရတော့မလိုလို … ဒီနေရာ ပုန်းရတော့မလိုလို … မရင်ဆိုင်ရဲ … အလင်းကလူနဲ့ .. အမှောင်ကလူ … မတူဘူးလေ …
လာပါတယ် … ကောင်မလေးတွေ … အတွဲလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ … ရုပ်ရှင်လာကြည့်ကြတယ် … ကဲကြတယ် … ကလိကြတယ် … ပျော်ကြတယ် … ဟုတ်တာပေါ့ … ချစ်သူနဲ့ ကလူကျီစယ်တော့ … ပျော်မှာပေါ့ … အေးတို့ကျတော့ … မပျော်ဘူး … ပိုက်ဆံရပေမယ့် … မပျော်ဘူး … အလိုက်အထိုက် နေရတယ် … စိတ်ညစ်တယ် … ဟင်း … အေးလည်း … ရီးစားတယောက်လောက်တော့ လိုချင်ပါတယ် … ခစ် … ခစ် … အပျော်ပေါ့ …
တခြားဘယ်မှာ ကောင်းမလဲ … အင်းယားကန် … ဟုတ်ပြီ … ဟိုနေ့က … သီတာလာပြောသွားတယ် … အင်းယားကန် … ငါးမိုင် မှတ်တိုင်တွေမှာ အလုပ်ကောင်းတယ်တဲ့ … ကိုယ်ရကိုယ်ယူပဲ … အခြေအနေတော့ ကြည့် … အစောင့်အရှောက်မရှိဘူး … မှတ်တိုင်မှာ စောင့်နေ … လာသမျှ ကား လျှောက်ငေး … ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရပ်ရင် … သွားလိုက် … ဈေးပြော … သေသေချာချာပြော … ဈေးတည့်ရင် … လိုက်သွား … ပြီးရင် … ပြန်လာ …
အေး … တရက် … ခြောက်မိုင်ဘက်ကို … ထွက်လာတယ် … မတူဘူး … လူနည်းတယ် … မှတ်တိုင်မှာ ထိုင်စောင့်နေ … မတ်တပ်ရပ်စောင့်နေ … ကားတွေက … ဖြတ်သွားတယ် … ကြည့်ကြတယ် … တချို့ကလည်း … လှောင်ကြတယ် … ပြုံးစိစိနဲ့ … ဟော … ဒီကားက … ဖြတ်တာ နှစ်ခါရှိပြီ … ဆူဇူကီးကားသေးသေးလေး … အမည်းရောင် … လူငယ်ပဲ … မဟုတ်ဘူး … လူငယ်ပုံစံဖမ်းထားတဲ့ … လူကြီး … နှာဘူးကြီးပေါ့ .. ခစ် … ခစ် …
မှတ်တိုင် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ သွားရပ်တယ် … ဘယ်လောက်လဲ … တခါနေရင် … ၈၀၀၀ … အိုကေ … တက် … အေး လိုက်သွားတယ် … တည်းခိုခန်းက … ဆက်ရှင်နဲ့ … တနာရီ … ခြောက်ထောင် … လာကြတယ် … တခြားအတွဲတွေလည်း … လာကြတယ် … ငယ်ငယ်လေးတွေ … လက်ခံတယ် … အမေးအမြန်းမရှိဘူး … အော် … သနားပါတယ် … မိန်းကလေးတွေ ပျက်စီးနေပြီ … ကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်မှာ … တည်းခိုခန်းရောက်နေတယ် … ငယ်ငယ်လေးနဲ့ .. ဆရာမကြီးတွေ ဖြစ်နေပြီ …
ဒီလူကြီးလည်း … ကဲတာပဲ … အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ … လျှောက်နမ်းတယ် … အေးလည်း … အလိုက်သင့် နမ်းတယ် … သူ့ဟာက … ပုဆိုးအောက်မှာ ထောင်ထနေပြီ … မြွေ … တော်တော်ဆိုးမယ့် မြွေ. … စုပ်ပေးတဲ့ … ဟင့်အင်းလို့ … လုပ်ပေးဘူးလို့ …
၈၀၀၀ ပေးမယ်တဲ့ … အေး … တွေဝေသွားတယ် … အင်း … အေး ပါးစပ်ထဲ ငုံကြည့်တယ် …
နံတယ် … အောက်သိုးစော် … ရွံတယ် … မုန်းဖို့ကောင်းတယ် … သူကတော့ ဖီးတွေ တက်နေတယ် … အေးကတော့ … အန်ချချင်တယ် … မတတ်နိုင်ဘူးလေ … သူများပိုက်ဆံလိုချင်တာကိုး … စုပ်လေ … ပိုပြီးကြီးလာလေပဲ … စုပ်ရမှာတောင် လန့်လာတယ် … အရည်တွေလည်း ထွက်လာတယ် … ညှီတယ် … ငံတယ် … မုန်းဖို့ကောင်းတယ် … တဇတ်ဇတ်နဲ့ … အောက်ကနေ … ပင့်တယ် … ဆောင့်တယ် … ရုန်းကြွလာတယ် … အော် … ယောက်ျားတွေများ … တယ်ရွတာပဲ … ကာမဂုဏ်ကို … လူလို ခံစားရတာ မဝနိုင်ဘူး … စုပ်ခိုင်းတော့ … ပိုဖီးတက်တာပေါ့ … အေး … လေးငါးခါလောက် လုပ်ပြီး … ရေချိုးခန်းမှာ … သွားအန်လိုက်တယ် … ပလုပ်ခဏခဏကျင်းပစ်လိုက်တယ် … ဒါတောင် … ပုပ်အဲ့အဲ့ အနံ့က မပျောက်ဘူး … စိတ်ထဲမှာလည်း မပျောက်ဘူး … ရင်ထဲမှာလည်း မကောင်းဘူး … ဒီလူကြီးလည်း … ဘာထူးလည်း … သေအောင် ဆော်တာပဲ … တန်အောင်ချတာပဲ … အသက်ရှူမဝအောင် … ဆော်တာ … အဆက်မပြတ်ပဲ … အေး … အော်တာပေါ့ … အော်လေ … ပိုချလေပဲ … သဘောတွေကျလို့ … လုပ်နေရင်း မောလာတော့ … အေးကို အပေါ်မှာ နေခိုင်းတယ် … ပက်ပက်စက်စက် … ဆောင့်တာ … ခါးကို ကိုင်ပြီး … မြှောက်တယ် … ပစ်ချတယ် … အောက်ကနေ … ထိုးပင့်တယ် … ဒုန်းကနဲ ဒုန်းကနဲ … သားအိမ်ကိုတောင် လာဆောင့်တာ … ရက်စက်တယ် … အသဲခိုက်အောင် … နာတာပေါ့ … မျက်ရည်တွေတောင် .. ကျချင်လာတယ် … အေးမငိုချင်ဘူး … အံကြိတ်ပြီး … ခံတယ် … လုပ်လေ … လုပ် … အေး … စိတ်တွေ … ဒီမှာမရှိဘူး … တခြားကို ရောက်နေတယ် … လျှောက်တွေးတယ် … သူလည်း လုပ်ချင်တာလုပ် … အေးလည်း … တွေးချင်တာတွေး … နောက်ကနေ … ဆော်တယ် … အေး မွေ့ယာခင်းကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် … ဆုပ်ပြီး … အော်တာပေါ့ … မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးမှာ … အပ်ပြီး … ငိုချင်တယ် … ဖင်ကို … အဆက်မပြတ်ဆော်တာများ … ဆွေမျိုးမေ့လောက်တယ် … နာလိုက်တာ … ပြောမနေနဲ့ … အဝင်အထွက်က … ခပ်သွက်သွက် … ပြင်းတယ် … ကော်တယ် … ထိုးတယ် … ညှောင့်တယ် … ဆရာပဲ … အေးတော့ … ဖတ်ဖတ်ကို … မောတယ် … နဖူးက … ချွေးတွေ … ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ … စိုကုန်တယ် … ဟူး … တော်သေးတယ် … ပြီးသွားလို့ …
အေး … မှတ်တိုင်ကို … ပြန်လာတယ် … ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်တဲ့ … ဟုတ်ကဲ့ … အစာဝတော့ … နှင်တာပေါ့ … ဒီလိုပါပဲ … ယောက်ျားတွေက … လိုတာရပြီးရင် … အချိုးပြောင်းသွားတယ် … အေး … မှတ်တိုင်ကို … ရောက်တော့ … ကောင်မလေးတယောက် … ကျောပိုးလွယ်အိပ်လေးနဲ့ … အေး သိတာပေါ့ … အေးတို့နဲ့ ဘဝတူပဲ … မျက်လုံး … အေးတို့က လူကို မဖမ်းဘူး … မျက်လုံးကိုပဲ လိုက်ဖမ်းတာ … လိုက်ကြည့်ရင် … မိန်းကလေးတယောက်က … မျက်လွှာချရင်ချ … မဟုတ်ရင် … မျက်စိလွှဲတယ် … အေးတို့ကျတော့ … ဟုတ်ဘူး … ပိုက်ဆံလိုချင်တာကိုး … ဘယ်သူခေါ်မလဲ … လိုက်ကြည့်တယ် … ငေးတယ် … ယောက်ျားတွေလည်း … ဒီလိုပဲ … ပုံမှန်ယောက်ျားလေးက … ကြည့်ရင် … ခဏပဲ … မျက်စိလွှဲသွားတယ် … အဲ … နေချင်တဲ့လူတွေကျတော့ … အေးတို့နဲ့ အကြည့်ချင်း … သိတယ် … ဒက်တယ် … သူဘာလဲ … ငါဘာလဲ … မြွေမြွေချင်း နားလည်တယ် … အခုလည်းကြည့် … ဒီကောင်မလေး … ငယ်ငယ်လေး … ကျစ်ဆံမြီးလေးကျစ်ပြီး … ကျောမှာချထားတယ် … ဂါဝန်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ … ငယ်ငယ်လေးလို့ ထင်ရတယ် … မကြိုက်ဘူး … ကျစ်ဆံမြီးကို … မကျစ်ရဘူး … အယူအဆလို့ပြောရမလား … အစွဲအလမ်းပြောရမလား … ဒါမျိုးလုပ်စားရင် … ကျစ်ဆံမြီး မကျစ်ရဘူး … အဖမ်းအဆီးများတယ် … ပုံမှန် မိန်းကလေးကတော့ ဘာအရေးလဲ … ကတုံးပဲတုံးတုံး … ဆံပင်ပဲ ကောက်ကောက် … အေးတို့ကျတော့ … မရဘူး … အေးတို့က … အမှောင်ထဲက လူ … ရဲတွေကလည်း … နပ်တယ် … တခါကြည့်တာနဲ့ … သူက ဘာလဲ … အဖမ်းခံရရင် … သွားတော့ … ထောင်ထဲ … အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်ကျမှာ … အေး … ကြောက်တယ် … အေး သူ့ကို … စကားပြောကြည့်တယ် … အဆင်ပြေလား ဘာလားပေါ့ … မပြေပါဘူး … မမရယ်တဲ့ … ဘဝအမောတွေ … ငြီးတွားကြတယ် … ဒီလိုပါပဲ … အေးတို့ကိုယ်စီမှာ … ဘဝအမောကိုယ်စီ ရှိကြတာပဲ …
သူ့နာမည်က … လရိပ်တဲ့ … နာမည်အမှန်တော့ ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး … အေးတို့ လောကမှာ … နာမည်အမှန် … မှည့်လေ့မှ မရှိတာ … သူလည်း … သနားဖို့ကောင်းတယ် … ကရင်မလေးတဲ့ … နယ်ကနေ … အလုပ်ရမယ်ဆိုပြီး … အဒေါ်က ညာခေါ်လာတာ … ဒီရောက်တော့ … ဖာတန်းရောက်တော့တာပဲ … ကုလားတယောက်နဲ့ လွှတ်ပေးတယ်တဲ့ … မလုပ်ချင်ဘူး … ငြင်းတော့ … အတင်း ပါးရိုက်တယ်တဲ့ … အိမ်သာထဲမှာ … သော့ခတ်ထားတယ် … သုံးရက်လောက် … အိမ်သာထဲမှာ အစာမကျွေးဘူးတဲ့ … အိမ်သာထဲက … ရေသောက်ပြီး … အူလိမ့်နေတာပဲတဲ့ … အရမ်းလည်းကြောက်တယ်တဲ့ … နောက်ဆုံးတော့ … ဖင်ကုန်းလိုက်ရတာပဲ … ဘယ်ခံနိုင်မလဲရှင် … ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ကောင်မလေးကို … ဒီလိုမျိုး နှိပ်စက်ပြီး … လိုင်းထဲသွင်းတာ … ရက်စက်လိုက်တာ … အဲဒါပြောတာပေါ့ … မြန်မာမျိုးဟေ့ … ဒို့ဗမာဆိုဆိုပြီး … လျှောက်အော်နေတာ … ပြီးတော့ … ကိုယ့်သွေးရင်းသားရင်းကို … ဖာတန်းပို့နေကြတယ် … ပြောတော့ လေကြီးလေကျယ် … လုပ်တော့ တလွဲ … အေးတို့ … အသားတဇတ်ဇတ်တုန်အောင် … ခံပြီးရတဲ့ … ပိုက်ဆံနဲ့ … ထမင်းစားရဲတဲ့ … လူတွေကို … ဘယ်အတန်းအစားထဲ ထည့်ရမလဲ မသိပါဘူး … အေးကတော့ … သတ်မှတ်လိုက်တယ် … ဖာထက်တောင် … အဆင့်အတန်းနိမ့်တယ် … ဖာပိုင်းလုံးတွေလို့ … တွေးမိတိုင်း ရင်နာပါတယ် … အေးတို့မှာ … အရှက်တရား မရှိတော့ဘူး … အကြင်နာတရားတွေ ခေါင်းပါးကုန်တယ် … အေးတို့ ရိုင်းတာ … ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ … တခါတလေ … လူတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာကို … ထွက်သွားချင်တယ် … မခံစားနိုင်တော့ဘူး … အထင်သေး အမြင်သေး မျက်လုံးတွေနဲ့ … ဖြတ်ကနဲ အကြည့်ခံရရင် … အေးရင်ထဲမှာ … ဝုန်းကနဲ မီးတောက်စေတယ် … ကိုယ်က … ဖာဆိုတော့လည်း … ဘာပြန်ပြောရဲမှာလဲ … ဆင်ဖြူ့မျက်နှာ ဆင်မဲ မကြည့်ဝံ့ဆိုသလို … အေး မျက်လွှာချလိုက်ရတာပေါ့ …
ယောက်ျားတွေက … ကောင်းကို မကောင်းဘူး … နုနုရွရွလေးမှ … ကြိုက်တယ် … နို့လေးတောင် … မဆူသေးဘူး … ဆွဲချင်နေတယ် … ပိုသဘောကျတယ်တဲ့ … ယုတ်မာလိုက်တာနော် … ကြည့်လိုက်ရင် … လူကြီးလူကောင်း … ပိုက်ဆံရှိတဲ့ပုံစံတွေ … အိုး … တည်းခိုခန်းများ ရောက်ရင် … သိရပါလိမ့်မယ် … အကြင်နာတရား လုံးဝမရှိတဲ့လူတွေ … အမှန်အကန် … ချတာ … နာလွန်းလို့ … အော်ရင် … သနားမယ်များမထင်နဲ့ … ပိုသဘောကျတယ် … လရိပ်ပြောတယ် … ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ ကုလားက … အရမ်းရက်စက်တယ်တဲ့ … ဖာခေါင်းက … သူ့ကို ချုပ်ထားတယ် … ရုန်းတော့ … ပါးကို … ဖြောင်းကနဲ ဖြောင်းကနဲ ချတာ … သွေးတောင်ထွက်တယ်တဲ့ … လူ မလှုပ်နိုင်တော့မှ … ဆောင့်ထည့်တာ … နည်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ … ကြောက်လွန်းလို့ … သေတော့မယ် … အမဲဖျက်သလိုပဲ … နှစ်ယောက်သား ၀ိုင်းဖျက်ကြတာတဲ့ … သွေးတွေလည်း အိုင်နေတာပဲတဲ့ … အဲဒီနေ့က … သူ ထမင်းမစားရဘူးတဲ့ … ဧည့်သည်က … စိတ်တိုင်းမကျလို့ … ထမင်း မကျွေးဘူးတဲ့ … သနားဖို့ ကောင်းလိုက်တာ … စစချင်း တလက … လိမ့်နေအောင် … အလိုးခံရတာ … အော်ဒါကလည်း … ကျသလားမမေးနဲ့တဲ့ … တယောက်ပြီးတယောက် … မမရယ် … တနေ့ ဆယ်ယောက်ခံရတယ် … စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တဲ့ … ယောက်ျားတွေကလည်း … ပါကင်ကျဆိုတော့ … သဘောတွေကျပြီး … စွတ်လုပ်တာတဲ့ … အားရဝမ်းသာ … အပေါင်းအဖော်တွေ လက်တို့လိုက်သေးတယ် … လာလိုက်တဲ့ … ယောက်ျားတွေ … နောက်ဆုံး … မခံနိုင်မှ … ပေးနားတယ်တဲ့ … ညဘက်ဆိုရင် … အိပ်လို့မရဘူးတဲ့ … အဖုတ်ထဲက … နာနေတာပေါ့ … အင်နဲ့အားနဲ့ … အဆောင့်ခံထားရတာ … ယောင်ကိုင်းနေတာပဲတဲ့ …ဟုတ်တာပေါ့ … အပျိုအရွယ်လေး … ဘယ်ခံနိုင်ပါ့မလဲ … သုံးလေးလလောက် ကြိတ်မှိတ်ခံရတယ် … လရိပ်ပြောရင်း … မျက်ရည်တွေ ဝဲလာတယ် … အေး … အရမ်းသနားတာပဲ …
အေးတို့ နှစ်ယောက် … စကားပြောကောင်းနေတုန်း … ကားအမဲရောင် တစီး … နှစ်ခါ ဖြတ်သွားတယ် … အေး သိတယ် … ဧည့်သည် … စော်ခေါ်တော့မယ် … အေးတို့နှစ်ယောက်ထဲက … တယောက်ကို … ဓါတ်ကျနေပြီ … တီ ဆိုပြီး … ဟွန်းသံပေးတယ် … ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ … သူ သွားရပ်တယ် … အေး … လျှောက်သွားပြီး … မေးတယ် … ဘယ်သူ့ကို ခေါ်မှာလဲ လို့ … အေးကို ခေါ်မယ်တဲ့ … သူ့ပုံစံက ရည်ရည်မွန်မွန် သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်ရှိတော့ … လရိပ်ကို ခေါ်ရင် … ထည့်ပေးလိုက်မလို့ပါ … အေးကိုပဲ ခေါ်မယ်တဲ့ … တညလုံးနေမယ်တဲ့ … ဘယ်လောက်လဲတဲ့ … နှစ်သောင်းခွဲလို့ … အိုကေတဲ့ … အနောက်တော့မပါဘူးနော်လို့ … အင်း … ကာရာအိုကေဆိုတတ်လားတဲ့ … ရပါတယ် လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် … သိပ်တော့မလုပ်ချင်ဘူး … ကာရာအိုကေဆိုတာလေ … သူ့ဒုတ်ကို ကိုင်ပြီး မှုတ်ပေးတာကို ပြောတာ … ခုနက … တခါမှုတ်ထားတာ … ပြန်တွေးမိပြီး … အန်ချင်လာတယ် … သူ့အရှေ့မှာမို့လို့ … မနည်းစိတ်ထိန်းထားရတာ … အိုကေတဲ့ … သဘောကျရင် … မုန့်ဖိုးထပ်ပေးမယ်တဲ့ … အေးလိုက်သွားတယ် … လရိပ်က မှတ်တိုင်မှာ ကျန်ခဲ့တယ် … ကားထဲမှာ မွှေးနေတာပဲ … အဲယားကွန်းကလည်း … အေးစက်နေတာပဲ … ချမ်းတောင် ချမ်းလာတယ် … လူကတော့ … လူလတ်ပိုင်းပါပဲ … ဗလက ခပ်တောင့်တောင့် … ခန့်ပါတယ် … အေး … ဖင်ကွဲအောင် ဆော်ခံရတော့မယ်နဲ့ တူတယ် … သူ့ပုံစံက … ရှမ်းလိုလို … ကချင်လိုလို … အေး မေးကြည့်တယ် … ဘာလူမျိုးလဲလို့ … ဗမာတဲ့ … သင်္ဘောသားတဲ့ … ဟိုက် … သင်္ဘောပေါ်မှာ … ချုပ်တီးထားသမျှ … အေးကို ဖြည်တော့မယ်နဲ့ တူတယ် … ယောက်ျားက နှစ်မျိုးရှိတယ် … တမျိုးက … လူကပ်တွေ … ဈေးအတင်းဆစ် … အတင်းလုပ် … မတန်မရာခိုင်း … ပြီးရင် ရစ်သေးတယ် … မပေးချင်ဘူး … နောက်တမျိုးက … တောင်းတဲ့ပိုက်ဆံ … အပြည့်ပေးတယ် … စိတ်ချမ်းသာရင် ပိုပေးသေးတယ် … ဒါပေမယ့် … သေချာတော့လုပ်ပေးရတယ် … ဆော်တာတော့ အမုန်းဆော်တာ … ခံပေါ့ … အေးက … ဖာပဲဟာ …
တည်းခိုခန်းရောက်တော့ … ၀ိတ်တာကို … ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ မှာတယ် … အရက်တလုံးလည်း … ကားပေါ်က ယူလာတယ် … ဂျော်နီဝါးကား … အဲဒါတော့ အေးသိတယ် … ဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ … ဒုတ်ကောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ … လူတယောက်တံဆိပ် … ဘာလို့မှတ်မိလဲမေးရင် … အေး … ပထမဆုံး ပါကင်ဖောက်ပြီး ပြန်လာတော့ … အဖေ ဝယ်သောက်တဲ့ … အရက် … အရမ်းမုန်းတယ် … အသဲထဲမှာ … ခိုက်နေအောင် … မှတ်ထားတာ … အဖေဝယ်လာတာ … အနီ … သူ သောက်တာ … အပြာ … အရမ်းဈေးကြီးတာပဲ … အနီ … အမည်း … အစိမ်း … ရွှေ … အပြာ … အေးမှတ်ထားဖူးတယ် … အေး … အရက်ထည့်ပေးတယ် … ပုလင်းက … နည်းနည်းလှုပ်လိုက်တာနဲ့ … တပက်ကျတယ် … ဖန်ခွက်ထဲ … ဆော်ဒါထည့်ပေးမယ်လုပ်တော့ … မလိုဘူးတဲ့ … ရေခဲရောဆိုတော့ … မလိုဘူးတဲ့ … ဒီအတိုင်း မော့သောက်လိုက်တယ် … ဟိုက် … ငါ လူပေါင်းမှားပြီ … သောက်မလားတဲ့ … ဟင့်အင်း … မသောက်တတ်ဘူးလို့ … နဲနဲသောက်ကြည့်တဲ့ … အေး … နည်းနည်း မြည်းကြည့်လိုက်တယ် … မွှေးတယ် … ချိုသလိုလို ခါးသလိုလို … အေး မခံစားတတ်ဘူး … ဗိုက်ထဲရောက်တော့ … တဖြေးဖြေး ပူတတ်လာတယ် … အေး စကားတွေ ရွှင်လာတယ် … ထပ်သောက်မိတယ် … တပက်ပေါ့ … ရီဝေဝေနဲ့ … သူနဲ့ စကားတွေ ပြောကြတယ် … ရည်ရည်မွန်မွန်ပါပဲ … အေး ရေချိုးခန်းထဲမှာ … အဝတ်တွေ သွားလဲလိုက်တယ် … အေး စိတ်တွေ ပျော်နေတယ် … သူ ရေသွားဆေးသွားတယ် … အေး … သူ့ကို နမ်းတယ် … သူလည်း ပြန်နမ်းတယ် … အေး တကိုယ်လုံးကို … နမ်းတယ် … အို … ဘာဖြစ်လို့ … ဒီယောက်ျားနဲ့ … ကျမှ … ငါ့စိတ်တွေ … ဗြောင်းဆန်ကုန်တယ် … အေး … မနေတတ်လောက်အောင် … သူ့အနမ်းတွေက … ကဲလွန်းတယ် … ကြိုက်မိပါတယ် … ချစ်မိသွားတယ် … အေး … သူ့ဟာကို … သေချာကိုင်ပြီး … စုပ်ပေးလိုက်တယ် … တယုတယနဲ့ … အစွမ်းကုန် … စုပ်ပေးလိုက်တယ် … သူ သဘောတွေ ကျနေတယ် … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ် … ကျေနပ်တယ် … လာတဲ့ … တော်ပြီတဲ့ … နေရအောင်တဲ့ … အေး ပက်လက်လေး လှန်ပေးလိုက်တယ် … သူ့ဟာ ဝင်လာတယ် … အားးးး … သူ့ဒုတ်က သေးတော့မသေးဘူး … ကြီးလည်းမကြီးဘူး … အနေတော်ပဲ … နည်းနည်းတော့ ထွားတာပေါ့ … ကောင်းတယ် … တဟင်းဟင်း … တရှီးရှီးနဲ့ … အေး တချီပြီးသွားတယ် … သူများတကာတွေလို … ဝုန်းဒိုင်းအုန်းဂွမ်း … လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး … မြန်လိုက် … နှေးလိုက်နဲ့ … အေး … သူ့ရမက်နောက်ကို … ကောက်ကောက်ပါအောင် … လိုက်သွားမိတယ် … တချီပြီးတော့ … အေး … အပေါ်ကို … တက်လိုက်တယ် … သူ့ကို … အပေါ်ကနေ … တတ်သမျှ မှတ်သမျှ ပြုစုလိုက်တာ … ဖင်လေးကို … ကော့လိုက် ကောက်လိုက်နဲ့ … မြင်းစီးသလို … ဒုန်းစိုင်း စီးပစ်လိုက်တယ် … ဖတ်ဖတ်ကို မောသွားတာပဲ … အေး … လေးဘက်ထောက်ပေးတယ် … လိုလိုချင်ချင်ပါပဲ … သူ နောက်ကနေ ဆောင့်သမျှ လိုက်လျောမိတယ် … အံလေးကြိတ်ပြီး … ဖင်လေးကို … ကော့ကော့ပေးတယ် … အရမ်းမောတော့ … အေးတို့ အိပ်ပျော်သွားတယ် … အိမ်မက်ထဲမှာ … သူနဲ့ အေး … လျှောက်သွားကြတယ် … ပျော်လိုက်တယ် … တကယ်ပါ … အေး … ဘဝမှာ … ယောက်ျားတယောက်ကို ချစ်မိသွားတာ … ဒါပထမဆုံးပါ … မနက်မိုးလင်းခါနီးလေး … အားပါးတရ … ချစ်ပွဲဝင်ကြတယ် … တကယ်ပါပဲ … အေး ဘဝမှာ … ဒီညလေးကို … အမြဲအမှတ်ရနေမှာပါ … အေးကို … တံတားဖြူမှတ်တိုင်အထိ … သူ လိုက်ပို့တယ် … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … အချစ်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး ထင်ထားတာ … သူနဲ့ ကျမှ … အေး ချစ်မိသွားတယ် … မှတ်တိုင်မှာ သူ ရပ်ပြီး ထွက်သွားတော့ … အေး … လက်ပြမိတယ် … နှုတ်ဆက်မိတယ် … ပြန်မဆုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ … အေး သိပါတယ် … အေး … ဝမ်းနည်းမိတယ် … မျက်ရည်ကျမိတယ် … ကန်ဘောင်ပေါ်မှာ … သွားထိုင်ပြီး … ငိုမိတယ် … ဘဝဆိုတာ … သောကတွေ အပြည့်နဲ့ပါလား … မိုးနဲ့ မြေလို … အလှမ်းကွာလွန်းတယ် … မနီးစပ်နိုင်တဲ့ ဘဝတွေကို … အေး … မုန်းမိတယ် … ရင်မောမိပါတယ် … ဝမ်းနည်းမိပါတယ် … တပတ်လောက် အေး … အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး … သူ့ကို ပြန်တွေ့ချင်တယ် … သူ့ကို မျှော်လင့်နေတယ် … မှတ်တိုင်မှာ … ကားအမဲရောင်ဆို … လိုက်ကြည့်ရတာအမော … တနေ့လုံး … အော်ဒါမလိုက်ဖူး … သူ့ကိုပဲ စောင့်နေမိတယ် … သူကတော့ … ဒါတွေ … ဘယ်သိပါ့မလဲရှင် … အေး … အရမ်းဝမ်းနည်းတယ် …
အေး … စိတ်ညစ်တယ် … မပျော်ဘူး … ဒီနေ့လည်း … အလုပ်မလုပ်ဘူး … အိမ်မှာပဲ အိပ်နေတယ် … မိုးရွာတော့ … တံစက်မြိတ်ကနေ ကျလာတဲ့ … မိုးရေစက်လေးတွေကို ကြည့်နေမိတယ် … တောတွေးတောင်တွေးနဲ့ ခေါင်းမူးလာတယ် … အေး … မတွေးချင်ဘူး … ဘာမှ မတွေးချင်တော့ဘူး … ဒီအချိန်မှာ … အိမ်ရှေ့ကို … ဟိုဘက်အိမ်က … ဒေါ်လှမွန် … ရောက်လာတယ် … မျက်ရိပ်မျက်ခြေနဲ့ … အပြင်ကို ထွက်ခဲ့ဖို့ … ခေါ်တယ် … လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ … အေးကို … လက်ဖက်ရည်တိုက်ပြီး … အကူအညီတောင်းတယ် … ပိုက်ဆံချေးမလားတဲ့ … ဟင့်အင်းလို့ … ချေးပါတဲ့ … ပိုက်ဆံအရမ်းလိုနေလို့ပါတဲ့ … မရှိဘူးလို့ … တနေ့လုပ်မှ တနေ့စားရတဲ့ သူအချင်းချင်း … ဘယ်လိုလုပ်ချေးမှာလဲ … အေးမှာလဲ တကယ်ပိုက်ဆံမရှိဘူး … တပတ်လောက် ဘာမှ မလုပ်ပဲ … ထိုင်စားနေတာ … ဒါဆို တခုကူညီပေးတဲ့ … ဘာကူညီရမှာလဲလို့ မေးတော့ … ဒေါ်လှမွန် … ပြောလိုက်တာကို … နားတော်တော်ခါးသွားတယ် … မွန်မွန်လေးကို … ပါကင်ဖောက်ချင်တယ်တဲ့ … မွန်မွန်ဆိုတာ … သူ့သမီး … ကိုးတန်းလား … ဆယ်တန်းလား … မသိပါဘူး … ကျောင်းတက်တုန်းဆိုတာတော့ … အေး သိတယ် … လုံးလုံးကစ်ကစ်လေးနဲ့ ချစ်စရာလေးပါ … တော်တော်ဒေါသထွက်သွားတယ် … ဘယ်နှယ့် … ကိုယ့်သမီး … အပျိုနုနုထွတ်ထွတ်လေးကို … ဖာခံခိုင်းမယ်တဲ့ … ဖာဇတ်သွင်းမယ်တဲ့ … မွန်မွန့်လို … ဖြူဖြူဝင်းဝင်း … ချစ်စရာကောင်မလေးဆို … လေးငါးသိန်း အသာလေးရမှာတော့ … အေးသိတာပေါ့ … ဒါပေမယ့် … အေး မလုပ်စေချင်ဘူး … သနားတယ် … ကိုယ်ချင်းစာတယ် … သူကလည်း … သိတယ် … ငါးသိန်းလောက် ရမယ်ထင်တယ်တဲ့ … ဆက်သွယ်ပေးပါတဲ့ … ကော်မရှင် တသိန်းပေးမယ်တဲ့ … ပိုက်ဆံ တသိန်းက မနည်းပါဘူး … ဒါပေမယ့် … အေး မလိုချင်ဘူး … ဘာလို့ ငွေလိုတာလဲ … မေးစမ်းကြည့်တော့ …
သားဖြစ်တဲ့ကောင်က … ညဘက် ဘောပွဲလောင်းတယ် … ရှုံးတယ် … ထားပါတော့ … အမေက … မနက် ဈေးထဲမှာ … နှစ်လုံးထိုးတယ် … ဟုတ်နေပြီ … အဖေက … အလုပ်မှာ … သုံးလုံးထိုးတယ် … ကုန်ပြီပေါ့ … ကဋေရှစ်ဆယ် သူဌေးသားအမိတွေများ … မှတ်နေလား မှတ်နေလားမသိပါဘူး … အဖေက ကူလီထမ်းတယ် … အမေက … ဈေးရောင်းတယ် … သားက ယောင်ချောက်ဆယ် … ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေပြီ … ပိုက်ဆံမရှိတော့ ပေါင်တယ် … ပေါင်စရာမရှိတော့ … ချေးတယ် … အလွတ်ချေးတယ် … နှစ်ဆယ်တိုး … တရာကို … နှစ်ဆယ်တိုး … အဲဒါနဲ့ ထပ်လောင်းတယ် … မိုက်လိုက်တာ … မိုက်ကြီး … မိုက်မ … မိုက်လေး သုံးယောက်ရေ … တတိတိနဲ့ … ကုန်တယ် … ဒီတော့ … ဒိုင်ဆီမှာ … အကြွေးနဲ့ ထပ်လောင်းတယ် … ကောင်းရော … အခု … ဟိုက … လာတောင်းတယ် … လူမိုက်တယောက် … လွှတ်လိုက်တယ် … လကုန်ရင် … အပြီးရှင်းပေးတဲ့ … မရှင်းပေးနိုင်ရင် … နင်တို့ကို အပြီးရှင်းမယ်တဲ့ … ကြွေးရှင်ကတော့ … တောင်းစရာရှိတာ … တောင်းမှာပဲ … မမှားဘူး … မှားတာက … သူတို့ … မိုက်တာက … သူတို့ … အခု … သူတို့ အရှုပ်ထုပ်ကို … ရှင်းဖို့ … ဘုမသိဘမသိ … မွန်မွန်ကို … ဖာခံခိုင်းမယ်တဲ့ … ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံ … ကမ္ဘာကျော်လောက်တယ် … ဒီလိုလူမျိုးတွေသာ များများရှိလို့ကတော့ … အေးတို့ မြန်မာနိုင်ငံလဲ … ဖာနိုင်ငံဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ … အေးက … ဒါလုပ်နေတာ … သူ သိပါတယ်တဲ့ … ဟုတ်လားလို့ … ပြန်ပြောလိုက်တယ် … ပြောချင်တာက … အကြပ်ကိုင်တာ … နင်မကူညီရင် … ရပ်ကွက်ထဲမှာ … ငါဖွလိုက်မယ်ပေါ့ … အေး … တခွန်းပဲ ပြောလိုက်တယ် … မကူညီနိုင်ဘူးလို့ … စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်နဲ့ … မကူညီတာ မဟုတ်ပါဘူး … ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ … တားဆီးကြည့်တာ … အေးလည်း … ငွေကြေးအရ မကူညီနိုင်ပါဘူး … အေး မလုပ်ပေးလဲ … တခြားလူ ချိတ်ပေးမှာပဲ … အေး စိတ်မကောင်းဘူး … အေးအေးဆေးဆေး အကူအညီတောင်းနေတာကနေ … ဒေါ်လှမွန် … စကားနာ ထိုးလာရော … လိုတာမရတော့ … ဒေါသထွက်လာတယ် … အေး စကားမများချင်ပါဘူး … ဒေါ်လှမွန် … ခနဲ့သွားတယ် … ခနဲ့ပါလေ … ခနဲ့ပါ … သူတို့ကျတော့ … တရားတယ် … တော်တော်တရားတယ် … လောင်းချင်သလို … လောင်းပြီး … မရှုနိုင်မကယ်နိုင်မှ … မွန်မွန်လေးက … ဖာခံပြီး ဆပ်ရမယ်တဲ့ … လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ … ဘေးကလူတွေ မကြားကြားအောင် … အော်ပြောသွားတယ် … ပြည့်တန်ဆာပါးစပ်က … ရွှေထွက်နေပြီပေါ့လေတဲ့ …
ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ … မွန်မွန်လေး … ပါကင်ဖောက်ခံရတယ် … ငါးသိန်းရတယ် … ပွဲစားက လေးယောက် … တယောက် ငါးသောင်း … ၀ိုင်းလှီးကြတယ် … ခုတ်ကြတယ် … ထစ်ကြတယ် … သုံးသိန်းပဲကျန်တယ် … ခံပေါ့ … မွန်မွန်ရယ် … ခံပေတော့ … သနားတော့ သနားတယ် … မွန်မွန်ကို … အရင်က နည်းနည်းတော့ … သဘောမကျဘူး … မကျေနပ်ဘူး … အေးတို့ အိမ်ရှေ့က ဖြတ်တိုင်း … ဟိုဘက်ခြမ်းကပဲ လျှောက်တယ် … သဘောက … အေးက ဖာလေ … သူ သိတယ် … ဖာအိမ်ရှေ့က ဖြတ်မလျှောက်ချင်ဘူးပေါ့ … နည်းနည်းတော့ ဝမ်းနည်းမိတယ် … မွန်မွန် ပါကင်ဖောက်ခံရတော့ … ဝမ်းသာလားဆိုတော့ … ဟင့်အင်း … ဝမ်းနည်းလားဆိုတော့ … ဟင့်အင်း … ဒေါသပဲထွက်မိတယ် … သနားမိတယ် … ဒီနေ့ … မွန်မွန် ကျောင်းသွားတယ် … ကျောင်းစိမ်းလေးနဲ့ … မျက်နှာလေးက … နွမ်းနေတယ် … အရင်နေ့တွေလို မဟုတ်ဘူး … အေး ကြည့်မိတယ် … ကြည့်နေမိတယ် … သူ … အေး ကို တချက်ဖြတ်ကနဲ ကြည့်တယ် … သိတယ် … အဲဒီ ခံစားချက်ကို … အေးသိတယ် … သူနဲ့ အေး … ဘဝတူသွားပြီ … ရှက်ရှာမှာပေါ့ … ဖြတ်ကနဲ ကြည့်ပြီး … ခေါင်းလေး ဆတ်ကနဲ ငုံ့သွားတယ် … မျက်ရည်တွေ ဝဲနေတယ် … တောက်ကနဲ … မျက်ရည်လေးတစက် … လမ်းပေါ်ကျသွားတယ် … အေး မြင်မိတယ် … သနားပါတယ် … လွယ်အိတ်လေးကို … ပိုက်ပြီး … ကျောင်းသွားရှာတယ် … နှမြောမိတယ် … မနက်တိုင်း … ကျောင်းကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင်သွားနေတဲ့ … ကောင်မလေး … မပျော်နိုင်တော့ဘူး … မိသားစုအတွက် … ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး ပေးဆပ်လိုက်ရတာ … ဘယ်သူမှန်လဲ … ဘယ်သူမှားလဲ … အေးလဲ မတွေးတတ်တော့ဘူး … သေချာတာတော့ … လူတွေက လူသားမဆန်တော့ဘူး … ကိုယ်ချင်းစားစိတ်တွေ … ပျောက်ကွယ်ကုန်တယ် … ဟိုးတုန်းက … မွန်မွန်လေးနဲ့ အေး … မျက်နှာချင်းဆုံတိုင်း … သူ့အကြည့်က ရိုင်းတယ် … အေးကို ပြည့်တန်ဆာမို့ … ရွံတဲ့အကြည့်မျိုးပေါ့ … အခု … သူ … အေးကို မကြည့်ရဲဘူး … သနားပါတယ် … ဝဋ်လည်တယ်လို့တော့ မပြောရက်ပါဘူး … သူ အခု … ကိုယ်ချင်းစာ တတ်သွားမယ်ထင်တာပဲ …
အေး … ဒီနေ့ အလုပ်သွားတယ် … မွန်မွန်လေးရဲ့ ရှက်ရွံ့စွာ ခေါင်းငုံ့သွားတဲ့ အကြည့်လေးကို … ဖျောက်မရဘူး … ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် … မွန်မွန်ရယ် … ဒီနေ့ … အေး … ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကို … သွားတယ် … ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး … လျှောက်ကြည့်တာ … မဝယ်နိုင်ပါဘူး … အေးလက်ထဲမှာ … လေးထောင်ပဲ ရှိတယ် … ဈေးဆိုင်တွေ လျှောက်ကြည့်တယ် … သိတယ် … ဖြတ်ကနဲ ကြည့်တဲ့ မျက်လုံးတွေကို … သိတယ် … မြင်တယ် … ဒင်း ဘာဆိုတာ … သိတယ် … ဒင်း … ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ … ယောက်ျားဖာတဲ့ … အေးတို့လို … ပိုက်ဆံမရှိလို့ … ဖာခံစားတဲ့ မိန်းမတွေလို … သူတို့လဲ … ငွေအတွက် … ဖာခံစားကြတယ် … ရွံတယ် … မုန်းတယ် … ဘယ့်နှယ့် … တောင့်တောင့်တင်းတင်း … ထောာင်ထောင်မောင်းမောင်း ယောက်ျားတွေက … အလုပ်မလုပ်ဘူး … ချွေး မစိုချင်ဘူး … အပင်ပန်းမခံချင်ဘူး … ကြည့်အုံး … နိုင်ငံခြား မင်းသားကျနေတာပဲ … ဝတ်ထာားတာက … အပျံစား … ဒုတ်ကိုလဲ … အပျံစား ပြင်ထားမှာပေါ့ … အားတိုးဆေးတွေ စား … ဂေါ်လီတွေထည့် … မမကြီးတွေ အကြိုက် … အံကြိတ်ပြီး … ကြိုးစားရအုံးမယ် … အံမယ် … လာခေါ်တယ် … ဈေးဦးပေါက်တယ် … ငတိမကြီးက … ကားအနက်ရောင်ကြီးနဲ့ … ဖြတ်ကနဲ ရပ်လိုက်တယ် … စကားသုံးလေးခွန်းပြောပြီး … ဖြတ်ကနဲ … ကားပေါ်တက်သွားတယ် … ဝူးကနဲ မောင်းထွက်သွားတယ် … အော် … ပိုက်ဆံရှိတဲ့ မိန်းမကျတော့လဲ … တကူးတက … ပိုက်ဆံပေးပြီး … ခံရရှာတယ် …. သူနဲ့ အေး … ဘာကွာလဲဟင် … မေးကြည့်ချင်တယ် … အေးက … ပိုက်ဆံမရှိလို့ … ဖာခံစားတယ် … သူက … ပိုက်ဆံရှိရက်နဲ့ … ဖာလိုက်ခံတယ် … အေး သာတယ်ထင်တာပဲ … အေးက ပိုက်ဆံရတယ် … သင်္ဘောသားမိန်းမ … အရာရှိမိန်းမ … သူဌေးမိန်းမ … အော် … သူတို့လဲ … ငတ်ရှာတယ် … ယောက်ျားနဲ့ အနေဝေးတော့ … သစ္စာမရှိတော့ဘူးပေါ့ … ရွလာတယ် … ထလာတယ် … ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့ … စိတ်ကွယ်ရာမှာ ကဲကြတယ် … ဘယ်သူ လာပြောရဲလဲ … ငါ့ပိုက်ဆံနဲ့ ငါ …. ခံတာ … နင်က … ပြည့်တန်ဆာ …. ငါက … ဘယ်သူ့မိန်းမ ဟဲ့ …
အေး … စိတ်လေသွားတယ် … ပန်းဆိုးတန်းဘက် … လျှောက်လာရင်း … မီးပွိုင့်ဘက်ကို ကွေ့လိုက်တယ် … မသွားချင်ဘူး … ပန်းဆိုးတန်းကို … သမ္မတ ရုပ်ရှင်ရုံဘက်ကို သွက်သွက်လေး … လျှောက်လာတယ် … တွေ့တယ် … အတွဲတွေ … ကောင်မလေးက … ငယ်ငယ်လေး … လမ်းလည်ကောင်မှာ ခါးဖက်ပြီး လျှောက်တယ် … ဖင်လေးက … သေးသေးလေး … နို့လေးက … စူရုံလေး … ကလေးသာသာ … အပျိုပေါက်စတွေပေါ့ … ကျောင်းတက်နေတုန်းအရွယ် … မိဘကွယ်ရာမှာ … ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်ကြတယ် … ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ … လက်သရမ်းကြမယ် … ဖီလင်တွေ တက်ကြမယ် … ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ … ကဲကြမယ် … စိတ်ပါလာတော့ … တည်းခိုခန်းကို ဒိုးကြတယ် … အင်း … ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေပြီ … အေး … နင် ဘာလို့ လိုက်တွန့်တိုနေတာလဲ … သဒ္ဒါလို့ … သူ ခံတာ … သူ့ဟာနဲ့ သူခံတာ … နင်က ဘာတွေ လိုက်တားမြစ်ချင်ရတာလဲ … သူတို့က … အမျိုးကောင်း သမီးတွေ ဟဲ့ … သူတို့ဘာသာ … သူတို့ချစ်သူနဲ့ … ကမြင်းကြောထတာ … နင်နဲ့ ဘာဆိုင်လဲ … အေး စိတ်တွေ ဘာဖြစ်နေတာလဲ …
သမ္မတဘေးနားမှာ … ဟိုတယ် အကြီးကြီးရှိတယ် … အေး မသွားဖူးပါဘူး … ရပ်ကြည့်မိတယ် … သဘောကျတယ် … ဟိုတယ်ကြီးက … ဟိန်းနေတာပဲ … ဟော … ထွက်လာတယ် … ကောင်မလေး တယောက် … အေးထက် အသက်နဲနဲကြီးမယ် … လှတယ် … မျက်နှာကို ပြင်ဆင်ချယ်သထားတယ် … ရွတယ် … တင်တွေ ရင်တွေက … ကားတက်နေတယ် … သိတယ် … သူက ဇယား … ဖုန်းဇယား … အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာပဲ … ခံတယ် … အေးတို့လို … လမ်းဘေး တည်းခိုခန်းမှာ ဘယ်ခံမလဲ … ဈေးကြီးတယ် … လူရွေးတယ် … အင်း … အလုပ်ဖြစ်တယ်နဲ့ တူတယ် … မျက်နှာလေးက နွမ်းနေတယ် … ခြယ်သထားပေမယ့် … အေး သိတယ် … ဒူးတွေ မခိုင်ဘူး … ယိုင်ချင်တယ် … ဒေါက်ဖိနပ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး … ညတုန်းက … ပယ်ပယ်နယ်နယ် ခံထားရလို့ … အားမရှိတာ … မဟုတ်သေးဘူး … ညတုန်းက ခံရရင် … ဒီလိုမဖြစ်ဘူး … သိပြီ … အချိန်ပိုင်း … ဆက်ရှင်နဲ့ ခံတာ … သုံးနာရီ … အနားယူချိန်မရှိလို့ … အားမရှိတာ … အေးထင်တာ မှန်တယ် … ယောက်ျားတယောက် စောင့်နေတယ် … လက်ထဲမှာ … ကလေးလေး ပွေ့ထားတယ် … သူ ဘယ်သူလဲ … ခေါင်းလား … ယောက်ျားလား … ဟိုယောက်ျားက … တခွန်းနှစ်ခွန်းပြောတယ် … ကောင်မလေးက … မျက်နှာ ညိုးသွားတယ် … ပိုက်ဆံ ခပ်ထူထူလေး တထပ်ကို … ဟိုလူ့ကို … ထုတ်ပေးတယ် … ကလေးလေးကို … ပွေ့ချီပြီး နမ်းလိုက်တယ် … ပြီးတော့ … ဟိုကောင့်လက်ကို ဆွဲတယ် … ဟိုကောင်က … ပိုက်ဆံကို သေချာရေနေတယ် … ပြည့်တယ် ဆိုတဲ့ အပြုံးမျိုး ပြုံးတယ် … သူ့ခါးကို ဖက်တယ် … အင်း … သူတို့က လင်မယားတွေ … ရက်စက်လိုက်တာ … အေး … ရင်မောသွားတယ် … အေး ရင်ပူသွားတယ် … ကလေးက … တနှစ်သား နှစ်နှစ်သားလောက်ပဲ ရှိမယ် … မိန်းမကို … ဖာခံခိုင်းတယ် … လူပုံစံက … တောင့်တောင့်တင်းတင်းပါပဲ … အင်္ဂါစုံတယ် … ယုတ်မာလိုက်တာ … ယောက်ျားဖြစ်ပြီး … မိန်းမကို ရှာမကျွေးဘူး … ဖာခံခိုင်းတယ် … အေး … ငိုချင်လာတယ် … သူတော့ မသိဘူး … အေးဆိုရင် … အေးသာဆိုရင် … ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကို … ဆက်ပေါင်းမှာလား … ချစ်နေမှာလား … ယုယမှာလား … အောက်ကျခံမှာလား … အေး မပြောတတ်ဘူး … စိတ်ညစ်လာတယ် … အိမ်ကို ပြန်တယ် … မိုးအေးအေးနဲ့ … အိပ်ပစ်လိုက်တယ် …
အိမ်မှာနေတော့ … လူတွေ အကြောင်းပိုသိလာတယ် … အေးတို့ ရပ်ကွက်ထဲက … အရူးမလေး … မိစံ … ဗိုက်ကြီးလို့တဲ့ … ယုတ်မာလိုက်ကြတာ … ရက်စက်လိုက်ကြတာ … နှမချင်းကိုယ်ချင်းမစာဘူး … ကြားကြားချင်း … ဒေါသထွက်မိတယ် … ယောက်ျားတွေများ … အောက်တန်းကို ကျလွန်းတယ် … မိန်းမ ဒီလောက်ရှားသလား … မရှားပါဘူး … မိန်းမယူလဲ ရတယ် … မယူနိုင်လဲ … ဖာတွေက အပုံလိုက် … ရိုက်သတ်လို့တောင် မကုန်ဘူး … လုပ်ပေါ့ … ပိုက်ဆံပေးပြီး … လုပ်ပေါ့ … အခုတော့ … ဟုတ်ဘူး … အရူးမတောင် … မရှောင်ဘူး … မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား … ဒီလိုနေလို့ … တခါထဲနဲ့တော့ … ဗိုက်မကြီးလောက်ဘူး … ခဏခဏ … လုပ်မှ … ဗိုက်ကြီးတာ … ခဏခဏ … ယုတ်မာကြတာပေါ့လေ … တောက် … ယောက်ျားဆိုတာ … ကောင်းကို မကောင်းတာ … ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူကလဲ … ပိုက်ဆံရှိတဲ့ အလျှောက် … ငွေထုပ်ပိုက်ပြီး … ကမြင်းကြောထတယ် … ပိုက်ဆံမရှိတဲ့လူကလဲ … တွေ့တာကို … ကြံတယ် … အရူးမကို ကြံတယ် … လောကကြီးက … ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲ … ဗမာလူမျိုးတွေ … အရှက်တရား … မရှိတော့ဘူးလား … အသိတရား မရှိတော့ဘူးလား … ကိုယ်ကျင့်တရား မြင့်မားပါတယ်ဆို … ဟင်း ဟင်း … ရီပစ်လိုက်ချင်တယ် … ဟားပစ်လိုက်ချင်တယ် … ပြောတော့ … ကိုယ့်အမျိုးကို စောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့ … ထွီ … သွေးရင်းသားရင်းကို … ရောင်းစားရက်တယ် … ထွီ … အရူးမကို … ကြံရက်တယ် … ထွီ … မိန်းမကို ဖာခံခိုင်း … ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ … ထမင်းစားရက်တယ် … ထွီ … အေးတို့တွေ … ဆင်းရဲပါတယ် … အေးတို့တွေ … ငတ်နေတယ် … အေးတို့လို မိန်းမသာားတွေ … မလုံခြုံတော့ဘူး … ငါတို့တွေ … ဖာမျိုးဖြစ်နေပြီဟေ့ … ငါတို့တွေ … ငါတို့တွေ … ဟီးးးးး … အေး … အားရပါးရ ငိုချလိုက်တယ် …